PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - Wesulwe izinyembezi akhelwa indlu
Wesulwe izinyembezi akhelwa indlu
Bese kuphele isikhathi ehlala kwevuzayo
ZESULIWE izinyembezi esalukazini saseTholeni, ngaKwaSwayimane, ILANGA elike labika ngaso ukuthi uMasipala waseMshwathi usakhele indlu yangaphela ngonyaka odlule.
UNkk Zondekile Dimba (91), owakhelwe indlu enamagumbi amane yilo masipala kodwa kwathatha isikhathi eside ukuba iphele, uthi ubebikelwa njengoba sekuqale ihlobo njengoba le abehlala kuyona imvula ibizingenela nje, sekufana nokuthi usemnyango kodwa ebe esendlini.
“Le ndlu ebengihlala kuyona ebingconywana, yapheshulwa yisiphepho ngo-2016 ngase ngihlala exhibeni elivuzayo. Ngesikhathi kubhaliswa abebekhahlanyezwe yimvula, ngabhalisa nami kanti ngizoba nenhlanhla lolu hlelo lokwakhelwa kabusha luqale ngami.
"Kuthe sekuqaliwe ukwakhiwa kwayo, kwathiwa usomabhizinisi obefake imali ukuba ngakhelwe, izinto zakhe ebhizinisini kazihambi kahle, ngakho ngeke esaqhubeka nokuyakha.
"Umasipala ungitshele ukuthi usazama ukuthola omunye usomabhizinisi ozoyiqedela njengoba ize yapheka kulo nyaka,” kusho uNkk Dimba.
Uthi inhliziyo yakhe ibibuhlungu kakhulu elokhu ebona izidonga zimile kungasaqhubeki, engenawo namandla okuziqhubekela. Ubonge umasipala ngokungamkhohlwa yize bese kuphele isikhathi eside kangaka kungenzeki lutho.
ILANGA likhuluma nemeya yalo masipala, uNkk Sphindile Mbhele, ithe nabo kubajabulisile ukuba bagcine bekwazile ukuthola omunye usomabhizinisi obezoqedela indlu kaNkk Dimba.
“Nathi bekusiphatha kabi ukungapheli kwayo, kodwa kungekho ebesingakwenza njengoba uhlelo lwezindlu zikahumeni kaluphethwe yithina, luphethwe emnyangweni wezokuhlaliswa kwabantu. Uthi nohlelo lokwakhela bonke abantu izindlu luyaqhubeka njengoba seluqalile ku- ward- 6.